Yakakosha Sei Yako LinkedIn Profile Photo? | Martech Zone
Makore akati wandei apfuura, ndakaenda kumusangano wepasi rose uye vaive nechiteshi cheotomatiki kwawaigona kumisa uye kutora mashoma emusoro. Mhedzisiro yacho yaishamisa… hungwaru kuseri kwekamera hwakaita kuti iwe uise musoro wako kune chinangwa, ipapo mwenje wogadziridzwa, uye boom… mafoto akatorwa. Ndakanzwa kunge dang supermodel ivo vakabuda vakanaka… uye ini ndakabva ndaaisa kune ese profiles.
Asi zvakanga zvisiri kwazvo ini. Ini handisi supermodel. Ndiri murume anotamba, ane misikanzwa, uye anofara chubby mukomana anoda kunyemwerera, kuseka, uye kudzidza kubva kune vamwe. Mwedzi mishoma yapfuura uye ndakanga ndichidya kudya kwemanheru nemwanasikana wangu nemukadzi wandaiziva vakagara pasi kuti vataure nesu. Mwanasikana wangu… asingakwanise kurega chero mamiriro ezvinhu achienda asina kutorwa mifananidzo… akatora mufananidzo wedu tiri pakati pekuseka.
Ndinoda mufananidzo uyu. Ini ndaida kugerwa, kumashure kwanga kuri huni hunodziya, mwenje waigamuchirwa, uye ndakapfeka t-shirt yeburgundy .. isina sutu kana tie. Mufananidzo uyu is ini. Ndichingosvika kumba, ndakaidzvanya ndokuiisa pamusoro pangu LinkedIn profile.
Ona uye ubatanidze naDouglas pa LinkedIn
Ehe, ini handingori mushandi paLinkedIn. Ini ndiri mutauri, munyori, muongorori, uye muridzi webhizinesi. Hapana vhiki rinopfuura ndisiri kubatana nemunhu angangove mudiwa, mutengi, kana mushandi pa LinkedIn. Ini zvachose handigone kusimbisa zvakakwana kuti yakakosha sei mufananidzo wako. Tisati tasangana, ndinoda kukuona, kuona kunyemwerera kwako, uye kutarisa mumaziso ako. Ndinoda kunzwa sekunge une hushamwari, nyanzvi, uye uri munhu mukuru wekubatana naye.
Ndinogona kuwana izvozvo kubva pamufananidzo? Kwete zvese… asi ndinogona kuwana fungidziro yekutanga!
Ko Mufananidzo weLinkedIn Unobata Kwako Kubhadhara?
Adam Grucela at Passport-Photo.online vakapindura uyu mubvunzo wakakosha nemamwe mazano akatanhamara ane nhamba dzinotsigira mune iyi infographic. Iyo infographic inobata pane mamwe akakosha maficha e LinkedIn profile photo… kusanganisira iwo epamusoro maitiro:
Charisma - ita kuti muenzi afarire uye avimbe newe.
Hunyanzvi - gadzirisa mufananidzo kune niche yako.
Quality -Odha chete mafoto akatorwa zvakanaka.
unhu – ita kuti vakuzive zviri nani.
Vanopa mamwe matipi - sekuhaya mutori wemifananidzo ane hunyanzvi, uchishandisa mufananidzo wemhando yepamusoro, ona kuti ndeye hunyanzvi, shandisa chimiro chakanaka uye ratidza rudo rwako. ivo vanopawo mamwe mabhegi matsvuku:
Usashandise chiso chinooneka zvishoma.
Usashandise mufananidzo wakaderera.
Usashandise mufananidzo wezororo.
Usashandise mufananidzo usiri wechokwadi.
Usashandise mufananidzo wekambani pane wega wega.
Usave pamusoro-pamusoro-pamusoro pakuve wakasununguka.
Usashandise foto pasina kunyemwerera!
Iyo infographic zvakare inoita kuti uzive kuti foto yako haisi zvese… kugadzirisa yako yese LinkedIn profile kwakakosha kuti uwedzere kugona kwako kubatanidza uye kubhadharwa. Iva nechokwadi chekuverenga zvimwe zvinyorwa zvedu uye zvinoperekedza infographics, kusanganisira izvi yakadzama gwara rekugadzirisa yako LinkedIn profile, pamwe chete neaya okuwedzera LinkedIn profile tips.
Asi Ndinovenga Kutora Mafoto
Ini ndinoiwana asi yako profile photo kwete zvako! Kana usingafariri kutora uye kushandisa mapikicha ako, bvunza shamwari yakanaka yaunovimba nayo. Hapana chakafanana nekutora mutori wemifananidzo uye shamwari kuti ikubudise kunze, tora mapfuti gumi nemaviri, uye worega shamwari yako yaunovimba nayo isarudze mufananidzo wekushandisa. Vanokuziva! Vanozoziva kuti ndeupi anoita basa guru pakukumiririra.
Tags: douglas karrinfographicLinkedInlinkedin headshotlinkedin kutora mafotolinkedin mufananidzolinkedin profileKupikisamufananidzo wemufananidzoprofile photo tips